Wararka - Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo xirto koofiyadda baseball
Mararka qaarkood, Haddii aad u maleyneyso in muuqaalkaaga lebiska ee bannaanka uu yahay mid aad u fudud, waxaad u diyaarin kartaa dabool baseball qaab isboorti oo caadi ah. Waxay kaa caawin doontaa qaabkaaga. Uma baahna waxyaabo aad u tiro yar si loo qurxiyo, koofiyadda baseball-ka waxay ka dhigi kartaa qaabkaaga mid caadi ah & Qurux badan, laakiin waa maxay muuqaalka ugu fiican ee wata koofiyadda baseball?
Koofiyad baseball + warqad funaanad dheer oo midab leh:
Dharka xarafka dhererka xarafka ee midabka-xannibaadda ah sidoo kale waa mid isboorti, waana ku habboon yahay daboolka baseball. Dharka caadiga ah ma sababaan isku dhac muuqaal ah koofiyadaha. Isku-dhafka sharaabaadyada iyo kabaha caadiga ah sidoo kale waa kuwo aad u qurux badan. Xirashada muraayadaha indhaha ayaa xitaa ka qurux badan.
Koofiyadda baseball + T-shirt + goonnada sinta:
Koofiyadaha baseball-ka iyo gogosha misigta sidoo kale kaligood ayaa is taagi kara. Midab jilicsan oo midabkiisu adag yahay oo funaanad leh sagxad xirxir ah oo midabkiisu ka duwan yahay ayaa ka buuxa midab dhallinyaro ah, isku qas oo ku dheji daboolka baseball,
Koofiyad baseball + dharka + jaakada kaararka:
Isku dhafka dharka iyo funaanadda kaararka cardigan waa mid isboorti ah, oo dadka siisa raaxo iyo deg deg. Isdhexgalka koofiyadda baseball wuxuu ku darayaa qaabab badan.